Loza tetsy Tsaralalàna - ewa.mg
Loza tetsy Tsaralalàna
News - Loza tetsy Tsaralalàna
Samy nahitana fahasimbana ny fiara roa nijanona nanolo­ana ny tobin-tsolika iray tetsy Tsaralalàna, omaly, rehefa nifandona. Tsy nisy ny aina nafoy sy ny olona naratra, araka ny fitantaran’ny olona teny an-toerana.
L’article Loza tetsy Tsaralalàna est apparu en premier sur AoRaha.
Nivoaka tamin'ny : 09/07/2019
Cliquez pour agrandir L’article Nécrologie du 15 septembre 2020 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Nécrologie du 15 septembre 2020 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Zaza tsy hita
Nalain’ny jiolahy roa misaron-tava tao an-tranony, tany Ambodirano-Amparafaravola, ny zazavavikely iray, enin-taona, tamin’ny 25 jolay 2019. Tsy mbola hita izy hatramin’ny omaly. Nanararaotra ny tsy naha tao an-toerana ny rain’ilay zaza ireo jiolahy tamin’io fotoana io. L’article Zaza tsy hita est apparu en premier sur AoRaha.
Fiara nivadika nibahan-dalana: maro ireo naratra mafy
Nitrangana lozam-pifamoivoizana indray ny lalam-pirenena fahefatra, omaly hariva tokony ho tamin’ny 04 ora. Tra-doza teo Ambatomahamanina ny fiara Sprinter iray avy any Antsiranana saika hihazo an’i Bekily. Nitondra fianakaviana handevina ny fiara kanjo nisy olana ny hisatra. Vokany, nivadika ny fiara ka naratra tamin’izany ny mpandeha miisa 18 tamin’ireo 25 tao anatiny. « Nisy tamin’ireo mpandeha no voa mafy vokatry ny loza. Ramatoa iray voalaza fa tapa-tanana tanteraka tamin’izany. », hoy ny fanazavan’ny zandary ao an-toerana, misahana ny famotorana. Araka ny fanadihadiana, nisy koa ireo ankizy naratra, saingy tsy ahina ny ainy. Lehilahy iray 37 taona kosa namoy ny ainy vantany vao taonga teny amin’ny hopitalin’Ankazobe.Nitohana tanteraka ny fifamoivoizana teny an-toerana tao anatin’ny ora roa. Ireo naratra efa nalefa vonjimaika eny amin’ny hopitaly. Voatazona atao fanadihadiana ao amin’ny zandary ao Ankazobe ny mpamily ny fiara. Henintsoa HaniL’article Fiara nivadika nibahan-dalana: maro ireo naratra mafy a été récupéré chez Newsmada.
Voafidy ho filoha amerikanina i Biden: nitory sady nitaky ny hamerenana ny fanisam-bato i Trump
Hiady hatramin’ny farany ny filoha am-perinasa sady kandidà, i Donald Trump. Mazava ny fandresen’ny kandidàn’ny antoko demokraty tamin’ny fifidianana filoham-panjakana amerikanina ka nahavoafidy an’i Joe Biden ho filohan’i Etazonia.Nahazo ny isam-bato hatramin’ny 290 i Joseph (Joe) Robinette Biden Jr ka voafidy ho filoha raha efa ampy handreseny ny vato 270. Filoha faha-46 hitantana an’i Etazonia, manomboka izao, eo amin’ny faha-77 taony, izy. Hany filoha amerikanina be taona indrindra niakatra teo amin’ny fitondrana. Nandreseny mazava ny tany amin’ny fanjakan’i Georgie, ahitana mpifidy vaventy miisa 16, ny any Pennsylvanie, miisa 20. Nitarika koa izy tany Nevada, ahitana mpifidy vaventy enina raha 11 kosa ireo any Arizona. Lany avy hatrany miaraka amin’i Joe Biden ho filoha lefitra koa i Kamala Harris. 56 taona ity vehivavy ity ary manana fiaviana indianina sy jamaikanina ny ray aman-dreniny. Sambany eo amin’ny tantaran’i Etazonia izany vehivavy voalohany tody amin’ny andraikitry ny filoha lefitra izany. Efa “procureur general” tao Californie, ny taona 2011 hatramin’ny 2017, izy io ary loholona tao amin’io fanjakana io koa, eo anivon’ny kongresy amerikanina, nanomboka ny taona 2017. Efa mandeha sahady ny tombana fa handimby toerana an’i Joe Biden ny tenany any aoriana any.Nitory eny amin’ny fitsarana i TrumpEtsy andaniny, tsipahin’ny filoha am-perinasa sady kandidàn’ny repoblikanina ny voka-pifidianana ary notakiny ny hamerenana fanisana vato amin’ireo fanjakana lehibe ireo. Nohitrikitrihiny fa nisehoana hosoka izany fifidianana izany. Efa nametraka fitoriana eny anivon’ny fitsarana ny tenany ny herinandro teo. Nohitsiny fa maherin’ny 70 tapitrisa ny vatony nangalaran’ny mpifanandrina na nanaovana hosoka. Tezitra sy diso fanantenana ireo mpomba an’i Trump manoloana izao voka-pifidianana izao. Na izany aza, tsy nisy ny fandrobana na ny korontana hatramin’ny omaly.Tombanan’ny mpanara-baovao fa tsy hampiova voka-pifidianana izany fitakiana izany. Efa mahazatra rahateo an-dry zareo Amerikanina ny valim-pifidianana mifanakaiky kely tahaka izao.Hanao ny fianianany ny 20 janoary izao ny filoha BidenHandray ny asany, ny 20 janoary ho avy izao, ny filoha Joe Biden ary hanao ny fianianany na ilay antsoina hoe «Inauguration Day». Handalo Tetezamita kely anefa ny fitantanana ka hamantatra ireo antontan-taratasy rehetra eo anivon’ny fitantanana an’i Etazonia ny tenany amin’izao fahalaniany izao. Efa tsy vahiny amin’izany anefa i Biden. Efa filoha lefitra amerikanina, fony fitondran’ny filoha, i Barack Obama, nanomboka ny 4 novambra 2008. Tsy hiova firy ny fifandraisan’i Etazonia amin’ireo firenen-tsamihafa amin’izao nahavoafidy an’i Biden izao. Ny Amerikanina sy i Etazonia miaraka amin’ny tombontsoany aloha no tsy maintsy arovany voalohany sy hindraindrainy. Miompana kokoa amin’ny lafiny sosialy, manakaiky ny sosialisma, ny fotokevitry ny hery ankavia tahaka ny demokraty ka tsy hifanalavitra amin’izany ny politikan’ny filoha vaovao.Synèse R. Fanamby tamin’ny zanany teo am-pialana ainaTanteraka ny fanamby: “Promise me Dad”. Tontosan’i Joe Biden ny teny nomeny an-janany, i Beau Biden, teo am-pialana aina rehefa tratran’ny homamiadana tany amin’ny lohany io zanany lahimatoa io, ny taona 2015. Noteren’i Beau Biden hanome teny sy fanamby ho azy ny rainy fa tsy maintsy ho lasa filohan’i Etazonia izy.Nandalo sedra sy alahelo ny fiainan’ity ho filoha amerikanina ity. Matin’ny lozam-piarakodia ny vadiny voalohany sy ny zanany vavikely. L’article Voafidy ho filoha amerikanina i Biden: nitory sady nitaky ny hamerenana ny fanisam-bato i Trump a été récupéré chez Newsmada.
Festival “SAR’nao”: hanasongadina ireo sary manodidina ny covid-19
Hisokatra anio talata 26 janoary ny fampirantiana sary, nampitondraina ny lohahevitra « Image innée, covid-19” etsy amin’ny kianjan’ny Fahaleovantena akaiky ny lapan’ny Tanàna Analakely. Manomboka amin’ny 10 ora maraina no hanomboka izany ary azon’ny rehetra atrehina. Vokatry ny fiaraha-miasan’ny kaominina Urbaine Antananarivo sy ny Festival “SAR’nao” moa ny ahafahana manatanteraka izao hetsika izao. Tafiditra ao anaty fakalazana “Volan’ny sary” izy ity, amin’izany, hisongadina ireo fampirantiana ny sary amin’ny andavanadrom-piainan’ny olona eo amin’ny fiatrehana ny zavamisy, toy ny valanaretina coronavirus izay mbola mianjady eto amintsika. Mandritra ny 3 andro ny fampirantiana, izay hifarana ny alakamisy 28 janoary izao. Hetsika efa fanaon’ny mpikarakara ihany ny toy izao hanomezana fahafaham-po sy hafatra ampitaina amin’ny sary, izay tontosain’ny Festival SAR’nao amin’ny kianja sy ny ivontoerana maro samihafa.NarilalaL’article Festival “SAR’nao”: hanasongadina ireo sary manodidina ny covid-19 a été récupéré chez Newsmada.